Semalt विशेषज्ञ: के लाभ एसईओ ले उद्यमीहरूलाई दिन्छ
एसईओ मार्केटिंग रणनीतिको महत्त्वपूर्ण अंश हो, जसले स्टार्टअपहरू र स्थापित फर्महरूले उनीहरूको सेवाहरू र उत्पादनहरूलाई प्रमोट गर्दछ। अनुसन्धानले भन्छ कि %२% खरीददारहरूले खरीद निर्णयमा खोज परिणामको प्रभाव स्वीकार्छ, र ती मध्ये %० %ले खोज परिणामहरूमा आधारित उत्पादनहरू खरीद गर्दछ। यसैले, दृश्यता व्यवसाय को लागी एक महत्वपूर्ण कारक हो।
ज्याक मिलर, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक एसईओ ले उद्यमीहरूलाई दिने फाइदाहरूको वर्णन गर्दछ।
१ प्रतिष्ठा व्यवस्थापन
प्रतिष्ठा र पहिलो प्रभाव फरक पर्दछ। प्रतिष्ठा व्यवस्थापन खोज ईन्जिन लाममा वर्चस्वको लक्ष्य हो। यसैले, प्राथमिक लक्ष्य तपाइँको ब्रान्डलाई शीर्ष खोज परिणामहरूमा र्याक गर्नु हो। वेबसाइट अप्टिमाइजेशनको साथ, सामाजिक मिडिया च्यानलहरूले तपाईंलाई ब्रान्डको प्रतिष्ठा निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। जब व्यक्ति तपाईको ब्रान्डको नाम खोजीमा यसको बारे अधिक जानकारी प्राप्त गर्न प्रविष्ट गर्छन्, तपाईको ब्रान्डको सोशल मिडिया खाताहरू शीर्ष results परिणाममा सूचीबद्ध हुनेछ, त्यसकारण सन्देशलाई सुदृढ पार्दै, जुन तपाईको कम्पनीले पुर्‍याउन चाहान्छ। यी पहलहरूले सम्भावित ग्राहकहरूमा अनुकूल प्रभाव छोड्छन्।
२. खोजशब्द अनुसन्धान
तपाईंको मार्केटिंग र पदोन्नति रणनीतिहरू वेबसाइटमा प्रयोग गरिएका कुञ्जीशब्दहरूमा धेरै हदसम्म निर्भर हुनेछ। यसले प्रयोगकर्ताको प्राथमिकतालाई अनुकूलित गर्न र साइटको ब्लग र ल्यान्डि page पृष्ठको सामग्रीको अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ। उच्च-गुणवत्ता कुञ्जी शब्द अनुसन्धानले तपाईंलाई जानकारीपूर्ण फिड सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ र ग्राहकलाई उत्पादन वा सेवाको बारेमा बढी सिक्न सक्षम गर्दछ। नतिजाको रूपमा, तपाईं खुशीका ग्राहक, राम्रो सामग्री र उच्च श्रेणीकरण पाउनुहुनेछ, जसले अन्ततः तपाईंको साइटमा ट्राफिक ड्राइभ गर्दछ।
Organ. जैविक ट्राफिक
राम्रो विचारहरू, उत्पादनहरू, र सेवाहरू भाइरल रूपमा फैलिन्छन्, र यसको वरिपरिको सबै बजले राम्रो खोजको क्रममा परिणाम दिन्छ, जुन अन्तर्गामी लिंकहरू, सन्दर्भहरू र सामाजिक स from्केतहरूबाट आउँदछन्। कोष सुरक्षित गर्न, उद्यमीहरूले दीर्घकालीन विकासको लागि व्यावहारिक व्यवहार बचत गर्नुपर्नेछ। अर्गानिक यातायात वर्तमान र भविष्यको प्रवृतिको प्रमुख सूचक हो, जसले तपाईंको व्यवसायको लागि महत्त्वपूर्ण ठूलो पुरस्कार दिन्छ।
एसईओ अभियानहरु प्रतियोगीहरु लाई प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। उद्यमीहरूले उनीहरूको व्यवसायलाई उनीहरूको प्रतिस्पर्धा बाहिर सेट र यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तिनीहरू र अन्य उद्योग खेलाडीहरू बीचको खाई खोजी कतारमा अझ ठूलो हुन्छ।
Social. सोशल मीडिया मार्केटिंग
सामाजिक सals्केतहरूले साइटमा ट्राफिक ड्राइभ गरेर कार्बनिक खोजीमा उच्च श्रेणीको पदोन्नति गर्दछ। सामाजिक मिडिया च्यानलहरूले यस बृद्धिलाई पूरक गर्दछ, हरेक व्यवसायको लागि आवश्यक हुन। उद्यमीहरूले कडा एसईओ अभियानको साथ उनीहरूको सामाजिक मिडिया प्रयासहरूलाई बल दिइरहेका छन्।
Trust. विश्वास ट्रस्ट
बजारमा सीमित मान्यताका कारण गैर-स्थापित व्यवसायहरूले थोरै विश्वास प्राप्त गर्दछन्। प्रयोगकर्ताहरूसँग साइटहरूमा अधिक विश्वास छ जुन उनीहरूको मनपर्ने कुञ्जी शव्दहरूको लागि राम्ररी रेन्क हुन्छन्। अर्गानिक खोज रैंकिंगले साइट क्लिकहरू सुधार गर्दछ भुक्तान गरिएको खोज परिणामहरूको तुलनामा। यी ईन्जिनहरूमा उच्च श्रेणीकरणले नयाँ कम्पनीहरूलाई उनीहरूको लक्षित दर्शकहरूको आँखामा बजारको शीर्षमा स्थित हुन मद्दत गर्दछ।
Long. दीर्घकालीन ब्रान्ड इक्विटी
लामो अवधिको ब्रान्ड इक्विटी स्थापना गर्न एसईओलाई रणनीतिका रूपमा अँगाल्ने आवश्यकता छ किनकि यसले उद्यमीहरूका लागि अनलाइन पहलहरूलाई बढावा दिन्छ। SEO मा खर्च प्रत्येक डलर लामो दौडमा एक मान अनुवाद।
एसईओ एक समय खपत गर्ने गतिविधि हो, जसको एक ठूलो स्रोतको आवश्यकता हुन्छ। जे होस्, यो एक आदर्श डिजिटल मार्केटिंग पनि हो जुन लामो अवधिमा रनको लागि रणनीतिक लगानीको रूपमा काम गर्दछ। Semalt ग्राहकहरु लाई प्रमाणित गरिसकेपछि , SEO ले उद्यमीहरुलाई उनीहरुको व्यवसाय जम्प - स्टार्ट गर्न, विश्वसनीयता र विश्वास बनाउन, कोषहरु सुरक्षित गर्न, र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दछ।